Indlela i-Islam inokunceda ngayo ababhemayo bayeke
Enye yeengozi zeeguba kukuba yingozi. Iyabangela impendulo yomzimba emzimbeni wakho xa uzama ukunikela. Ngoko ke, ukuyeka ukuhlala kunzima. Nangona kunjalo, abanye abantu banokufumanisa ukuba ngosizo luka-Allah kunye nokuzibophezela kwakho ekuziphuculeni ngenxa ye-Allah, kunye nempilo yakho, kunokwenzeka.
IYiya - Yenza Injongo Yakho
Okokuqala kucetyiswa ukuba wenze injongo eqinileyo, ukusuka entliziyweni yakho, ukuyeka lo mkhuba obi.
Yithembela kumazwi ka-Allah: "... Xa uthatha isigqibo, yithembela ku-Allah." UThixo uyabathanda abo babeka ithemba labo kuye .Ukuba u-Allah uyakunceda, akukho bani unokukunqoba; - emva koko-oko kunokukunceda? Ngoko-Allah, ke, makholwa makabeke ithemba lawo "(Qur'an 3: 159-160).
Sitshintsha indlela ohlala ngayo
Okwesibini, kufuneka ugweme iimeko apho usetyenziselwa ukutshaya kunye nabantu abenza njalo kuwe. Ngokomzekelo, ukuba ngabahlobo abathile abuthana ndawonye ukuba bashunqise, khetha ukuhlala kude nendawo leyo. Kwizinga elikhuselekileyo , kulula kakhulu ukuphindaphinda ngokuba "neyodwa." Khumbula, iteksi ibangela umlutha womzimba kwaye kufuneka uhlale ngokupheleleyo.
Fumana ezinye iindlela
Okwesithathu, uphuze amanzi amaninzi kwaye uzigcine uxakeke kwezinye izinto. Sebenzisa ixesha kwiMosque. Dlala umdlalo. Thandaza. Sichitha ixesha kunye nosapho kunye nabangenabucimi.
Yaye ukhumbule amazwi ka-Allah: "Nabo bazama kanzima kwiNdaba Yethu, Ngokuqinisekileyo siya kubakhokela kwiindlela zethu, kuba ngokuqinisekileyo u-Allah unabo abakwenza okulungileyo" (Qur'an 29:69).
Ukuba Uphila Ngomuntu Obhema
Ukuba uhlala kunye okanye ngabahlobo nababhemayo, okokuqala, bakhuthaze ukuba bayeke, ngenxa ka-Allah, impilo yabo, kunye neyabo.
Yabelana nabo ngolwazi apha, kwaye unikele ngenkxaso kwinkqubo enzima yokuyeka.
Khumbula ukuba ngamnye uya kumelana no- Allah yedwa, nangona kunjalo, kwaye sijongene nokukhetha kwethu. Ukuba bayenqaba ukuyeka, unelungelo lokukhusela impilo yakho kunye nempilo yentsapho yakho. Musa ukuyivumela endlwini. Musa ukuyivumela kwikota edibeneyo kunye nosapho lwakho.
Ukuba umntu otshaya ngumzali okanye omnye umdala, akufanele sinyamekele ukunyamekela impilo yethu "ngaphandle kwehlonipho." I-Qur'an icacile ukuba asiyikuthobela abazali bethu kwizinto ezingavunyelwe ngu-Allah. Ngomonde, kodwa ngokuqinisekileyo, ubacebise ngezizathu zokhetho lwakho.
Iingoma ezilungileyo kakhulu uJoan Baez
6 Iingoma zeDinosaur zokupheliswa kweeNkcazo ... kunye nesizathu sokuthi azisebenzi
Bala i-Osmotic Pressure Example Problem
Ndiyabulela, Iimpawu zikaThixo Ukuvakalisa
Iintetho ezilungileyo ezivela ku-Shakespeare ka-Henry V
Kuphi Ukufumana Impahla Yama-Islamic Mortgage
IYunivesithi yaseMillersville yasePennsylvania
Ukuguqulwa kweSimboli seSperman
I-Shirt Striped Shirt ne-Beret: I-Origins of Stereotype
Ixesha elidlulileyo leJamani
Iintlawulo zoBomi ziPhumela kwiMfundo
Ukuhlola iCarina Nebula
Syria | Iinkcukacha kunye neMbali
9 Iqela lebhola leMidlalo yebhola leMidlalo eliKhuselekileyo KUFUNEKA ukuba ugijime
Imigaqo-nkqubo ye-6 ephakamileyo yamazwe